कोरोनाभाइरसलाई रोक्न सक्ने औषधी : रेम्डेसिभिरले जगायो आशा – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/कोरोनाभाइरसलाई रोक्न सक्ने औषधी : रेम्डेसिभिरले जगायो आशा
कोरोनाभाइरसलाई रोक्न सक्ने औषधी : रेम्डेसिभिरले जगायो आशा
कोरोनाभाइरसको उपचारमा एउटा प्रयोगात्मक औषधी प्रभावी देखिएको छ । बुधबार अमेरिकी सरकारी तथा औषधी उत्पादक कम्पनीका अधिकारीहरुले ओषधीले औसतमा कोरोनाभाइरस संक्रमितलाई चार दिन अगाडि नै निको पार्ने देखिएको बताएका हुन् ।
चीनको ऊहानमा पहिलो पटक देखिएको यस भाइरसले हालसम्म २ लाख २४ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ । यो भाइरसबिरुद्ध कडा परीक्षण पास गर्ने जिलिड साइन्सेसको ‘रेम्डेसिभिर’ पहिलो औषधी हो । स्वास्थ्य अधिकारीहरुले कोरोनाभाइरसको खोप बन्न अझै एक वर्ष टाढा रहेको भनिरहँदायस भाइरसको उपचारका लागि औषधी फेला पर्नुले वैश्विक महामारीमा ठूलो प्रभाव पार्ने आशा गरिएको छ ।
रेम्डेसिभिर : के कोभिड–१९ को महामारीमा बरदान बन्ला यो औषधी ?
अमेरिकाको नेशनल इन्सिटिट्युट अफ हेल्थ (एनआईएच) ले विश्वभरका १०६३ जना कोरोनाभाइरस संक्रमितहरुमा रेम्डेसिभिरको प्रयोग र त्यसको प्रयोगबिना यसको परीक्षण गरेको थियो । ह्वाइट हाउसमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा एनआईएनको नेशनल इन्सिटिट्युट अफ एलर्जी एन्ड इन्फेक्सियस डिजिजेजका निर्देशक डा. एन्थोनी फाउचीले यो औषधीले संक्रमितको उपचार समयलाई औसतमा ३१ प्रतिशतले कम गर्ने बताए । औसतमा उपचारका लागि १५ दिन लाग्छ । यो औषधी प्रयोग गर्दा संक्रमितहरु ११ दिनमा नै निको हुने बताइएको छ ।
देखियो कोरोना, संक्रधुलिखेल अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा थप एक जनामामित संख्या २१८ पुग्यो